IDigital Water Works, Inc. ifumana utyalomali ngobuchule kwiiNkqubo zeBentley -Geofumadas
Matshi, 2019 Zobunjineli, Microstation-Bentley
Utyalo-mali olutsha luyakwandisa ukubakho kobume behlabathi kwiinkampani zombini kunye nokubonelelwa kwamanzi kunye noomatshini bamashishini abucala
Denver, Colorado (United States), Matshi 1 we-2019 - ImiSebenzi yamanzi eDijithali, inkokheli yehlabathi kwiisombululo zedijithali zeziseko zophuhliso lwamanzi, namhlanje zivakalise utyalo-mali olucwangcisiweyo kwinkampani yi-Bentley Systems. Le mali ivumela Digital Water Works and Bentley wandise umkhokele ngokunikela izisombululo ngcono kwiinkampani infrastructure amawele digital unikezelo kunye nococeko amanzi kamasipala kunye abucala - izisombululo kunye ngamandla ukwandisa ukubonakala zokusebenza, ukuphucula ukusebenza, lungiselela inkcitho ezinkulu kunye nokunciphisa iindleko ezipheleleyo zobunini bezibonelelo zakho zamanzi.
Isicwangciso soMsebenzi weMigodi yamanzi ukuzalisekisa izicelo zayo ezidibeneyo kwi-software efanelekileyo yokuthengisa jikelele (ii-COTS) ezifana ne-OpenFlows kunye ne-Bentley Systems 'iTwin iinkonzo, apho iBentley iza kuba neelayisenisi ngqo kwiiNkonzo zabaManzi beMigodi. I-software yokusebenzisana ayilona yodwa; ImiSebenzi yamanzi eMdaka iya kuqhubeka ngokusebenzisana kunye nabaqhubi beekhompyutha kunye nabaxhasi beekhnoloji zokubonisana neenkonzo zobunjineli ukuba banikele inkonzo engcono kumacandelo amanzi. Njengomphumo wotyalo-mali, uBentley uya kuba nelungelo lokumisela amalungu amabini kwibhodi yeMisebenzi yamanzi eMigodi.
Ngombulelo ulwazi lwayo olunzulu lwezentengiselwano, ubuchule beklasi yehlabathi kunye nobuchwepheshe obuphambili, iMisebenzi yamanzi eDijithali yindawo ekhethekileyo yokuncedisa amanzi kunye neenkonzo zokuncedisa ucoceko. , iguquguqukayo kwaye iphelele ngokusekelwe kwiinkqubo zoshishino kunye ne-COTS software. Isicwangciso esiphezulu sejospatial sivumela iinkampani zesebenzi ukuba zisebenze kwaye zigcine izibonelelo zamanzi ezinokuthi zilungele, ngelixa zigcina ukuthotyelwa, zidibanise amazinga afanelekileyo enkonzo kwiindleko eziphantsi kakhulu ezijikelezayo zobomi kunye nokwandisa ukwaneliseka kwamakhasimende.
Ukudibanisa ingqondo-time real nokuhlaziya lwesithuba, ngamawele digital ukuvumela iinkqubo Ukulinganisa jikelele, ukusasazwa amanzi kunye nokuqokelelwa amdaka kunye nokuthelekelela immersive nokubonakala okuhlalutya iziphumo inkxaso isigqibo ulawulo yokusebenza zokusebenza kunye nokulungiswa kobuchule, eqhutywa yi-intelligence. Amawele edijithali avumela nokulawulwa komsebenzi kunye nexabiso (zombini edibeneyo kunye nelungelelaniso), ukulondolozwa kugxininisekile ekuthembekeni kwezizathu ezingundoqo kunye nokusebenza kakubi, kunye nokuphathwa kobuchule bokujikeleza ubomi bezinto ezisekelwe kumngcipheko ukuphucula iindleko zomjikelezo wobomi, ukwandisa ubomi obuncedo beziseko kunye nokubeka phambili, ukulawula nokwenza iiprojekthi zokuphucula iiprojekthi.
"Siyavuya yaye ehloniphekile ukufumana le utyalo-qhinga Bentley," watsho ngumseki kunye CEO Digital Water Works, uPawulos F. Boulos, Gqirha, BCEEM, Hon.D.WRE, Dist.D.NE, Dist.M.ASCE , I-NAE. Ubukho babo behlabathi kunye nobunkokeli kwiimveliso zedijithali zedijithali zamandla, ioli kunye negesi, iindawo zokuthutha kunye neemigodi zibaluleke kakhulu, kwaye intsebenziswano yethu yamava aphezulu kunye neepotfoliyo zezisombululo ziya kuba yinzuzo enkulu kulo shishini. lwamanzi kwaye iya kubonelela ngexabiso elithengileyo kubaxhasi bethu. "
U-Boulos uthe ii-twins zedijithali zeteknoloji zophuhliso ziya kuhanjiswa kwiinqanaba eziliqela kwiinyanga ezintlanu ukuya kwezilishumi ezizayo, kwaye "ngenyanga ezayo, siza kuqalisa inkqubo yokuphayona yamanzi kunye namacandelo enkonzo yobunjineli. abafuna ukuthatha inxaxheba kwiiplani zoyilo lwemveliso baze benze uvavanyo lwesofthiwe kwi-beta ".
UMlawuli Jikelele Bentley Systems, uGreg Bentley wathi, "Utyalo-mali ka-Bentley Systems e Digital Water Works imele ingqalelo yethu onceda abantu 'ukubandakanywa digital' iqumrhu kudlala indima ebaluleke kakhulu ekuncedeni infrastructure abanikazi Zisebenzise ngokugcwele ubuchule bamawele edijithali. Sikholelwa ukuba i-software yethu yokuvula imodeli ye-OpenFlows kunye ne-ITwin Iinkonzo ezikhokelayo ziyakomeleza ukuqhubela phambili kwamanzi kwinkonzo yamanzi angcolileyo kwi-digitization. Kodwa sikholelwa ngakumbi ngakumbi ukuba indlela evulekile, exhaswe ngumhlanganisi ozimeleyo osebenzisa izisombululo zethu ezingenakuze zifikeleleke, zingakwazi ukufezekisa inzuzo kwiinkampani zenkonzo nganye kwaye zikhawuleze ikhefu lokufunda kubo bonke.
"Kwaye ngokuqwalasela indlela yakhe yokuqhubela phambili kwimbonakalo yamanzi kwiziseko zophuhliso lwamanzi kwihlabathi, bekungekho mntu usebenza ngakumbi kunoDkt. Paul Boulos ekukhokheni iinjineli kunye neenkampani zobunjineli, ngeDijithali ImiSebenzi yamanzi, ukuxhamla amathuba angenamkhawulo ngoku avulekileyo ngamawele edijithali. "
Bentley iqeshe abasebenzi ngaphezu 3.500, ovelisa ngaphezulu kwe 700 yezigidi kwimali yonyaka kumazwe 170 ukusuka 2012, iye imali ngaphezu 1.000 million kuphando, uphuhliso kunye ukuzuza. Ukususela ekuqaleni kwayo kwi-1984, inkampani iye yahlala ezandleni zabasunguli bayo abahlanu, abazalwana bakaBentley. Izabelo zeBentley zisebenza ngokumema kwi-NASDAQ yamashishini abucala; Iqabane elijongene neqhinga le-Siemens AG liqokelele ityityana encinci ngaphandle kwelungelo lokuvota. www.bentley.com
Malunga neMisebenzi yamanzi eDamari
ImiSebenzi yamanzi eDoloji yindlela entsha ye-teknoloji isisombululo esinikezelwa ukuvuselela kuphela umgangatho wamanzi wamanzi kunye namanzi angcolileyo. Le nkampani ngobuchule sidibanisa amandla ngamafu, ubukrelekrele ngumntu, abenzi boluvo IoT, ubunjineli jikelele Ukulinganisa kunye nokuhlaziya phambili ukwakha uze uyisebenzise ngaphandle izisombululo ubunzima amawele ezibanzi kwaye zithembeke digital yeziseko amanzi ezikrelekrele, oluzinzileyo kakhulu kunye nokuzinzileyo. Isiphumo saneleyo kunye neengcamango ezinokuthi zenze ukuba iinkonzo zamanzi zamanzi kunye namanzi angcolileyo zilungiselele kwaye zitshintshe iinkampani zazo kwaye zigcine ukusebenza kweziseko zabo kwixesha elide kunye neendleko zokuhamba kweyona nto ephantsi. Eyasungulwa kwi-2018 nguPaul F. Boulos, inkampani yaseDenver esekelwe inkxaso kwibhodi yabalawuli kunye nebhunga elicebisa ngeengcali ezikhokelayo kwezobuchwephesha, ulawulo kunye nobunjineli abazinikezele kwicandelo lamanzi. Ukufumana olunye ulwazi, tyelela www.digital-ww.com okanye udibanise neMisebenzi yamanzi eDemari kwi Twitter y LinkedIn.
Imisebenzi yamanzi yamanzi
UMlawuli, uLhwebo loNxibelelwano
Post edlulileyo«Ngaphambilini IQonga leHlabathi leGeospatial-2019
Post Next Indawo emanyanisiweyo-Isisombululo esifunwa yi-Geo-EngineeringOkulandelayo »